Ninka Leh 7-daan Calaamadood Waa Kan Ay Haweenkoo Dhan Raadiyaan,Tii Heshana Iskama Deyso | Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Ninka Leh 7-daan Calaamadood Waa Kan Ay Haweenkoo Dhan Raadiyaan,Tii Heshana Iskama Deyso
Dunidaan waxaa ka buuxo niman halis ah sidaa darteed niman wanaagsan inla helo ma fududa.
Hadaba, haddii aad nasiib leedahay oo aad heshay nin wanaagsan gacanta ku dhag marnaba hasii deyn lana orod oo nolol farxad leh ku nooloow waligaa.
Haddii uu ninkaaga leeyahay 7-daan calaamadood waa inuusan marnaba kaa baxsan.
Nin walba kuuma xushmeynayo sidii haween marka hadii uu si wanaagsan kuula dhaqmo isla markaana ku xuahmeeyo ilaasho oo yuusan marnaba kaa baxsan.
2- Dareensiin inaad ku weyntahay/ Boqorad oo kale
Waaba tahay boqorad sidaa darteed ninkaaga waxaa saaran masuuliyada ah inuu ku kuula dhaqmo kuuna daweeyo sida boqorada aad tahay.
Iyadoo ay jirto inuu ku taageerayo, qaar kamid ah ragga waxay isku dayi doonaan inay hoos kuu celiyaan markasta oo ay arkaan inaad kor usoctid oo aad guul gaareysid maxaa yeelay waxay u arkaan qatar marka ninka ku garab istaaga horeyna kuugu wada inaad gaartid guulaha riyadaada waa nooc dhif ah oo aadan awoodin inaad weysid haddii aad weysidna ay adkaan doonto inaad heshid mid lamid waana arrin aad waligaa ka shalaayn doonto.
4- Wuuku Jecelyahay
Haddii aad xiriir la leedahay nin aad uu jecel aadan shaki ka qabin jaceylkaas waxaa tahay naag nasiib leh ee ha iska sii deynin.
5- Aamin darro
Guur ayaa maalin walba burbura sababo la xiriira aamin darro sidaa darteed haddii aad si buuxda ugu kalsoontahay jaceylkaaga, siraha iyo lacagta ma heli doontid marnaba nin kaas lamid ah mar kale haddii uu mar kaa fakado.
6- Nin waqtigiisa kuu hura
Qof walba waa uu mashquulaa balse haddii uu kuu huraayo qaar kamid ah waqtigiisa si uu kuula joogo marnaba kama shalaay doontid ilaalintiisa.
7- Nin ku dhageysta
Naag walba waxay ku riyootaa inay hesho nin dhageysta shekadeeda iyo waxyaabaha kusoo kordha nolosheeda haddii uu waqti ku bixiyo inuu dhageysto dhamaan waxa aad u sheegeyso isagoon aanan mar marsiyo keenin fadlan heyso ninkaas oo yuusan kaa fakan.
Gabaryahay Gacaliyahaaga Ka Ilaali Hadalladaan Ma Wanaagsana Haddii Kale....
Talooyin Kaa Caawinaya Inaad Noqoto Seey wanaagsan Oo Hogaan U Noqda Guur Farxad Leh